Maxay tamar-koronto qorraxda EPC-yada iyo horumariyeyaashu samayn karaan si ay ugu guuleystaan ​​hawlgallada
Waxaa qoray Doug Broach, Maareeyaha Horumarinta Ganacsiga ee TrinaPro
Iyadoo falanqeeyayaasha warshadaha ay saadaalinayaan dabaylo xoog leh oo ku shaqeeya cadceedda korantada, EPCs iyo horumariyeyaasha mashruuca waa inay u diyaar garoobaan inay horumariyaan howlahooda si ay ula kulmaan baahidan sii kordheysa. Sida dadaal kasta oo ganacsi, geeddi-socodka qalliinku wuxuu la yimaadaa khataro iyo fursado labadaba.
Tixgeli shantaas talaabo si aad si guul leh ugu cabirto howlaha qorraxda ee korantada:
Toos u soo iibsiga tooska ah ee dukaamaysi hal-joogsi ah
Hawlgallada miisaamidda waxay u baahan tahay hirgelinta astaamo cusub oo ganacsiga ka dhigaya mid waxtar badan oo toosan. Tusaale ahaan, halkii lala macaamili lahaa tiro sii kordheysa oo ah alaab-qeybiyeyaal iyo qeybiyeyaal si loo daboolo baahida sii kordheysa inta lagu jiro miisaanka, soo iibsiga waa la fududeyn karaa oo la toosin karaa.
Hal dariiqo oo loo maro tan waxaa ka mid ah in la xoojiyo dhammaan qaybaha iyo soo-iibinta qaybaha hal shirkad oo hal mar loo dukaameysto. Tani waxay tirtiraysaa baahida loo qabo in laga iibsado shirkado iyo alaab-qeybiyeyaal badan, ka dibna isku dubarido maraakiibta kala duwan iyo saadka geynta mid kasta oo ka mid ah.
Dardargeliyo waqtiyada isku xirnaanta
In kasta oo mashaariicda korontada ku shaqeeya ee cadceedda laga dhaliyo (LCOE) ay hoos u sii dhaceyso, haddana qarashyada shaqaalaha dhismaha ayaa sii kordhaya. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay meelaha sida Texas, halkaasoo qaybaha kale ee tamarta sida jajabinta iyo qoditaanka jihada ay u tartamaan isla musharixiinta shaqo sida mashaariicda qoraxda korontada.
Qiimaha horumarinta mashruuca ee hooseeya oo leh wakhtiyo iskuxidh dhakhso ah. Tani waxay ka hortageysaa dib-u-dhaca iyadoo lagu ilaalinayo mashaariicda jadwalka iyo miisaaniyadda. Xalka qoraxda utility utility ee Turnkey wuxuu caawiyaa sameynta iskuxirka nidaamka si dhakhso leh iyadoo la hubinayo isdhexgalka qaybaha iyo isku xirnaanta shabakada.
Dardargeli ROI oo leh faa'iidooyin tamar sare
Haysashada kheyraad badan ayaa ah dhinac kale oo muhiim ah oo lagama maarmaan u ah in si guul leh kor loogu qaado howlaha. Tani waxay u oggolaaneysaa fursado badan oo dib-u-maalgelin ah shirkadda si ay u soo iibsato qalab dheeri ah, shaqaaleyso shaqaale cusub iyo ballaarinta xarumaha.
Xirmooyinka wadajirka ah ee isku-xidhka, rogayaasha iyo trackers-ka hal-dhidibka ah waxay hagaajin karaan isdhexgalka qaybaha waxayna kobcin karaan guulaha tamarta. Kordhinta faa'iidooyinka tamarta waxay xawaareyneysaa ROI, oo ka caawisa daneeyayaasha inay u qoondeeyaan ilo dheeri ah mashaariicda cusub si ay u kobciyaan ganacsiyadooda.
Tixgeli inaad ku daba gasho maalgashadayaasha hay'adaha maalgelinta
Helitaanka maalgeliyeyaal iyo maalgashadayaal sax ah ayaa muhiim u ah miisaanka. Maalgashadayaasha hay'adaha, sida hawlgabka, caymiska iyo lacagaha kaabayaasha dhaqaalaha, waxay had iyo jeer fiiriyaan mashaariic adag oo bixiya xasillooni, muddo-dheer "dammaanad-u eg".
Maaddaama qoraxda korontada ay sii socoto inay kobciso oo ay bixiso soo-celin isdaba-joog ah, qaar badan oo ka mid ah maal-gashadayaasha hay'adaha ayaa hadda indhaha ku haya inay yihiin hanti macquul ah. Wakaaladda Caalamiga ee Tamarta Cusboonaysiinta (IRENA) ayaa soo warisay a kororka tirada mashruucyada tamarta la cusboonaysiin karo ee ku lug leh maalgashadayaasha hay'adaha sannadka 2018. Si kastaba ha noqotee, mashaariicdani waxay kaliya xisaabtameen ku dhowaad 2 boqolkiiba maalgashi, iyagoo soo jeedinaya awoodda raasamaal ee hay'adda si weyn looga faa'iideysan.
Iskaashi lala yeesho bixiyaha xalka qoraxda oo dhan
Si mug leh u waafajinta dhammaan talaabooyinkan hal geeddi-socod aan xuduud lahayn waxay noqon kartaa mid ka mid ah qaybaha ugu adag ee howlaha baaxadda. Qaado shaqo aad u tiro badan adigoon haysan shaqaale ku filan oo wax walba ka qabta? Tayada shaqadu way dhibtaa oo waqtiyada kama dambaysta ah ayaa la tebay. Si firfircoon u shaqaalayso shaqaale ka badan xaddiga shaqada soo socota? Kharashaadka shaqada ee dusha sare ayaa cirka isku shareeraya iyadoon caasimada u soo gelin inay daboosho kharashyadan.
Helitaanka isku dheelitirka saxda ah waa khiyaano. Si kastaba ha noqotee, iskaashi lala yeesho bixiye xalka qorraxda oo dhan-ah wuxuu u shaqeyn karaa sidii isku-dheelitirnaan weyn oo loogu talagalay howlaha miisaanka.
Taasi waa halka ay ka timaaddo Xalka TrinaPro. Iyadoo la adeegsanayo TrinaPro, daneeyayaashu way gacan ka geysan karaan tallaabooyinka sida soo iibsiga, qaabeynta, isku xirnaanta iyo O&M. Tani waxay u oggolaanaysaa daneeyayaasha inay diiradda saaraan arrimaha kale, sida asalka hoggaamiyeyaal badan iyo dhammaystirka heshiisyada si loo ballaariyo howlaha.
Baadhid Buugga Hagaha Tilmaamaha Bilaashka ah ee 'TrinaPro Solutions Guide' si aad wax badan uga barato sida loogu guuleysto miisaanka hawlgallada qorraxda korontada.
Tani waa qaybtii saddexaad ee taxane afar qaybood ah oo ku saabsan qoraxda korantada. Goor dhow dib kala soco qeybta xigta.